Yakatumirwa ne Tranquillus | Jan 5, 2022 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Kukanganisa kwakajairika kudzivirira mune yehunyanzvi email
Zvakaoma kuona zvikanganiso zvese zvinogona kuitwa pakutumira email yehunyanzvi. Kamwe kanguva kekusateerera nekukanganisa kwakabva kwasvika. Asi izvi hazvisi pasina mhedzisiro kune zvese zviri mukati meiyoe. Isu tinofanirawo kutya kuti mukurumbira weiyo dhizaini inogona kukuvara, izvo zvinonetsa mune bhizinesi mamiriro. Kuti uzvidzivirire pakukanganisa uku, zvakakosha kuziva zvimwe zvacho.
Matauriro asina kunaka eruremekedzo pamusoro peemail
Kune zviuru nezviuru zvekutaura zvine ruremekedzo. Nekudaro, imwe neimwe fomula inochinjirwa kune yakatarwa mamiriro. Iyo nzira isiriyo yehuremekedzo pamusoro peiyo email inogona kukanganisa zvese zvirimo muemail, kunyanya sezvo iri mutsara wekutanga unowanwa nemugamuchiri.
Fungidzira, semuenzaniso, kuti panzvimbo yeshoko rekufona "Monsieur", unoshandisa "Madame" kana kuti haunzwisise zita remugamuchiri. Kuodzwa mwoyo kunosuruvarisa, ngatitarisana nazvo!
Ichi ndicho chikonzero kana iwe usina chokwadi chezita kana zita remugamuchiri wako, zvakanakisa kunamatira kune yekare Mr. / Ms. call formula.
Kushandisa chirevo chekupedzisira chisina kukwana
Mutsara wekupedzisira wekuremekedza pasina mubvunzo nderimwe remazwi ekupedzisira anozoverengwa nemunyori wako. Ichi ndicho chikonzero isingagoni kusarudzwa chero ipi zvayo. Iyi fomula haifanirwe kuve yakajairwa zvakanyanya kana kunyanyisa. Chinetso ndechokuwana mwero wakafanira.
VERENGA Email template kuti uregerere kune waunoshanda navo
Kune mafomula emhando yepamusoro akananga kune mavara kana mavara. Ivo mune mamwe mamiriro akakodzera maemail ehunyanzvi. Asi iva nechokwadi chekudzivisa zvikanganiso zvakadai se "Ndichitarisira kudzoka kwako, tapota gamuchira kuratidzwa kwekutenda kwangu kwakadzama."
Mazwi chaiwo ndeaya: “Kumirira kudzoka kwenyu, ndapota gamuchirai kutaura kwekutenda kwangu kwakadzama”.
Kutadza kushandisa aya mafomula emhando yepamusoro, zvinogoneka kushandisa mapfupi mafomula, sekukurudzirwa nemaitiro emaemail ehunyanzvi.
Mumwe anogona kutora, pakati peaya, mafomula emhando:
Kukuda iwe zuva rakanaka
Kushaya email yehunyanzvi
Iyo yekusaina nhanho zvakare chinhu chakakosha chekutarisa. Kana iwe usingawanzo kanganisa zita rako, dzimwe nguva unokanganwa kugadzirisa siginecha yako pakombuta yako.
Shandisa zvipfupiso kana kunyemwerera
Mapfupi anofanirwa kudziviswa mune email yehunyanzvi, kunyangwe iwe uri kutaura nevamwe vako. Izvi zvinokutendera kuti usaite chikanganiso mumamiriro emumwe mutori wenhau.
Kurambidzwa kwakafanana kunoshandawo kune vanonyemwerera. Nekudaro, dzimwe nyanzvi hadzishore maitiro aya kana vanyoreri vari vashandi. Asi zvakanakisisa kurega.
Iwo anowanzo kanganisa mubhizinesi email January 5th, 2022Tranquillus
pashureKarenda yemazororo eruzhinji muna 2022
zvinoteveraZiva makodhi ekushandisa mumamiriro ehunyanzvi